အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရန် တရားရုံး၌ ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု အဂတိ လိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲ?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကုန်သည်များအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများအသင်းတို့ကို လာဘ်စား၊ မစား မေးကြည့်ပြီး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရန်တရားရုံး၌ ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်ဆိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း FDA ညွှန်ချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်က မေ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်သို့ တရားရုံးထုတ်ချိန်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
”အန်ကယ်က တပ်မတော်မှာ ၃၃ နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ အရပ်ဘက်မှာက ခြောက်နှစ် ပေါ့။ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ၃၉ နှစ်ရှိပြီ။ နောက်တစ်ချက်က ဂျာနယ်တွေကရေးတဲ့အခါမှာ လာဘ်စားတယ်လို့ရေးတယ်။ အလွဲသုံးတယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ အလွဲသုံးတာမဟုတ်ဘူး။ အမှုမှန်ပေါ် ပေါက်အောင် တရားရုံးမှာ ဥပဒေနဲ့အညီ ရင်ဆိုင်သွားမယ်။ အန်ကယ်နဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကုန်သည်များအသင်းတို့၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများအသင်းတို့ရှိတယ်။ လာဘ်စားတယ်၊ မစားတယ်မေး ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အခုကိစ္စလည်းပဲ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်တရား ဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်သွားမယ်”ဟု FDA ညွှန်ချုပ်ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်က တရားရုံးထုတ်အပြီးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ရုံးထုတ်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားခွင်(၂) တရားသူကြီး ဒေါ်ညိုညိုဝင်းက တရားလိုဖြစ်သူ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှ စစ်ဆေးရေးမှူး ဦးသန်းဇော်ဝင်းအား လိုပြသက်သေ တင်သွင်းမှုနှင့်အတူ အမှုကိုဆက်လက်စစ် ဆေးခဲ့ပြီး နောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန်း အား မေ ၁၈ ရက်သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုခဲ့သည်။ ”ဒီနေ့စစ်ဆေးတာက တရားလိုဖြစ်တဲ့ ကော်မရှင်ကစစ်ဆေးရေးမှူး ဦးသန်းဇော်ဝင်းကို ဆက်ပြီးစစ် ဆေးတာပါ။ အမှုကိုနောက်တစ်ပတ်ပြန်ချိန်းလိုက်တယ်။ တရားလိုတင်ထားတဲ့ လိုပြသက်သေအရေအတွက်က ၃၆ ဦးရှိတယ်။ နောက်ရုံးချိန်းမှာလည်း တရားလိုကိုပဲ ဆက် လက်စစ်ဆေးသွားမှာပါ”ဟု မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ် တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားလိုဖြစ်သူအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှ စစ်ဆေးရေးမှူး ဦးသန်းဇော်ဝင်းအနေဖြင့် ယင်းအမှုအတွက် လိုပြသက်သေ ၃၆ ဦးတင်သွင်းထားပြီး နောက်အပတ်ရုံးချိန်းများတွင် လို ပြသက်သေများကို စစ်ဆေးသွား မည်ဖြစ်သည်။ FDA ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်သည် နေပြည်တော် FDA ဓာတ်ခွဲခန်း အဆောက်အအုံနှစ်လုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်၊ ခရိုင်ရုံး ၁၂ ခုအား ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ဒါရရှိသည့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများထံမှ ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြု၍ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ် ၁၅၁၄၃၉၇၈၆ (ကျပ်သိန်းတစ်ထောင့်ငါးရာကျော်) ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် နေအိမ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို လက်ခံရယူပြီး နေ ပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက်ရှိ ဆောက်လုပ်ဆဲနေအိမ်နှင့် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ် ကျေးရွာအနောက်ဘက် မြေကွက်တွင် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ နေအိမ်၊ ကားဂိုဒေါင်၊ ဂိတ်တဲ၊ ရေကူးကန်နှင့် ရေပန်းဆောက်လုပ်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ် ပေါက်သဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က ဒေါက်တာသန်းထွဋ် အားအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ- ၅၆ အရ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရဲစခန်း တွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂ဝ ရက်က တိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အား ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် ကော်မရှင်မှစစ်ဆေးရေးမှူး ဦးသန်းဇော်ဝင်းက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်သို့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပ ဒေပုဒ်မ-၅၆ ဖြင့် တရားစွဲဆို တင်ပို့ခဲ့ရာ တရားလွှတ်တော်က ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ် (၁/၂ဝ၁၈) ဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘုရင့်နောင်တံတား အနီးတွင် ကွန်တိန်နာ ယာဉ်တစ်စီး လမ်းလယ်တုံးနှင့် တက္ကစီကို တိုက်မိ၊ တစ်ဦး??